Mpanamboatra foibe vokatra | Orinasa sy mpamatsy ivon-toeram-pamokarana China
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny rafitra fitetezana GPS ampiasaina amin'ny motocycle. Ny indostrian'ny fiara dia manana fitakiana henjana tokoa amin'ny lafiny fampandehanana sy fizotrany, kalitao ary fanaterana ara-potoana. Ireo rehetra ireo dia laharam-pahamehana sy fototry ny fitsipiky ny asa Asteelflash, manerantany. Amin'ny maha orinasa elektrônika mandeha amin'ny fiara sy mpanamboatra solosaina PCBA automatique, izahay, ao Pandawill, dia manolotra serivisy avo lenta amin'ny injeniera, famolavolana ary prototyping.
Fakan-tsarimihetsika fanatanjahan-tena any ivelany
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny vokatra fakantsary fanatanjahan-tena any ivelany. Ireo fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa, manomboka amin'ny vokatra audio ka hatramin'ny azo anaovana akanjo, filalaovana na zava-misy virtoaly mihitsy aza, dia mifamatotra hatrany hatrany. Ny tontolon'ny dizitaly iainantsika dia mitaky fifandraisana avo lenta sy fitaovana elektronika ary fahaizana mandroso, eny fa na dia ho an'ny vokatra tsotra indrindra aza, manome hery ny mpampiasa manerantany.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny telemetry amin'ny fotoana tena izy ampiasaina amin'ny ekipazy. Ireo fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa, manomboka amin'ny vokatra audio ka hatramin'ny azo anaovana akanjo, filalaovana na zava-misy virtoaly mihitsy aza, dia mifamatotra hatrany hatrany. Ny tontolon'ny dizitaly iainantsika dia mitaky fifandraisana avo lenta sy fitaovana elektronika ary fahaizana mandroso, eny fa na dia ho an'ny vokatra tsotra indrindra aza, manome hery ny mpampiasa manerantany.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny rafitra fanaraha-maso LED. Izahay, any Pandawill, dia manampahaizana manokana amin'ny serivisy fanamboarana trano an-tsaina. Misaotra ireo orinasan-tsika manan-tsaina, ny injenieranay sy ny masininay dia mampiasa fandalinana angon-drakitra lehibe, computing cloud, intelligence intélitive (AI) ary 3D-pirinty hamoronana fitaovana mifandraika amin'ny trano manan-tsaina.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny tabilao fanaraha-maso signal. Ny indostrian'ny indostrialy dia iray amin'ny ampahany lehibe naroson'ny Pandawill nefa izao isika dia manatri-maso ny Internet of Things, miaraka amin'ny fijerena manokana ny Internet Internet of Things (IIoT), izay hitondra fifandraisana sy mandeha ho azy amin'ireo orinasa sy orinasa manodidina ny izao tontolo izao.
Fitaovana fakana angon-drakitra IoT
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny fitaovana fanalana data data IoT. Manomboka amin'ny serivisy enjeniera sy ny famokarana ka hatramin'ny fivorian'ny birao vita pirinty marani-tsaina, izahay, ao amin'ny orinasa Pandawill EMS, dia mitondra vahaolana manam-pahaizana amin'ny fitaovana Internet of Things.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny fitaovana fanasitranana laser. Ny dian-tongotra ISO 13485 voamarina manohana ny filanao ilaina amin'ny indostria henjana indrindra: ny fahaizantsika ara-pahasalamana dia manarona faritra miavaka marobe avy amin'ny fitaovan'ny diagnostika ka hatramin'ny fitaovana finday, hatramin'ny fivorian'ny birao vita pirinty (PCBA) ka hatramin'ny fivorian'ny vokatra.
Biraon'ny ultrasound birao fitsaboana gerd